«Trend Hunter»: Faa’iidada dhakhsaha leh ee ku jirta Crypto IDX | vfxAlert official blog
«Trend Hunter»: Faa’iidada dhakhsaha leh ee ku jirta Crypto IDX
Adigoo furaya ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah , waxaad ku kasban kartaa macaash daqiiqado yar gudahood. Laakiin sida lacag looga sameeyo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah maalmaha ciidaha iyo sabtida iyo axada marka sarrifka lacagaha qalaad iyo suuqyada saamiyada la xidho Tan waxaa lagu samayn karaa cryptocurrencies laga ganacsado 24 saacadood / 7 maalmood iyo istiraatiijiyadda «Trend Hunter».
Dhibaatada ugu weyn ee calaamadaha ganacsiga ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa boqolkiiba hooseeya ee faa'iidada macaamilka. Istaraatiijiyad kasta oo maaraynta lacagta ah, waa inay ahaataa ugu yaraan 75-85%, haddii kale, suurtagal noqon mayso in magdhow laga bixiyo calaamadaha binary ee bilaashka ah ee waqtiga la aqbali karo. Mise si isdaba joog ah ayey isu beddeleysaa iyadoo ballaaran!
Waxaa loo xisaabiyaa sida celceliska qiimaha afar lacagood: Bitcoin, Ethereum, Litecion iyo ZCash. Marka , saadaalinta mala awaalka ah waa “la sifeeyay” waxaana la sameyn karaa saadaalino la isku halleyn karo.
Istaraatijiyad ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah «Trend Hunter»
Celcelis ahaan saddex jibbaar (EMA) celcelis ahaan leh 10, 25 iyo 50 . Go'aamiso jihada isbeddelka muddada-gaaban iyo muddada-dhexe. On biibiile leh isbeddel sarreeya, waxaad isticmaali kartaa kanaalka qiimaha, gudaha aad ku dhex ganacsan karto (ugu yaraan 10-15 dhibcood ballaaran). Burburku wuxuu noqon doonaa calaamad binary ah oo isbeddel cusub ah. Habkani waxaa lagula talinayaa oo kaliya ganacsatada qibrada leh!
Ikhtiyaar CALL . Qiimuhu wuu ka sarreeyaa dhammaan Celceliska Dhaqdhaqaaqa ama wuxuu ku jabayaa "dhakhso" EMA (10) xagga hoose ilaa kor. MACD waa cagaar oo ka sarreeyaa eber.
Dooro door . Xaaladaha soo noqnoqda: qiimaha ayaa ka hooseeya dhammaan Celceliska Dhaqdhaqaaqa ama jabiya EMA (10) kor ilaa hoos. MACD waa casaan oo eber ka hooseeya.
Aynu soo koobeyno : inkasta oo ay yar-weyntahay marka la barbardhigo lamaanaha lacagaha iyo hantida saamiyada, cryptocurrencies waa aalad ganacsi oo dhab ah oo siinaysa faa'iido wanaagsan oo deggan.
Binomo wuxuu leeyahay sumcad inuu yahay dillaal lagu kalsoon yahay wuxuuna bixinayay Crypto IDX dhowr sano hadda. Ikhtiyaaraadka ikhtiyaari ikhtiyaariga ah waxaa lagu furay daahitaanno ugu yar, ma jiraan wax dhibaato ah oo laxiriirta macaashka oo ganacsade kastaa wuxuu heli karaa dakhli dheeri ah iyada oo aan loo baahnayn in la beddelo istiraatiijiyadda iyo qaabka ganacsiga.